डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे नै सभामुख हुनुपर्नेमा जोड |
डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे नै सभामुख हुनुपर्नेमा जोड
प्रकाशित मिति :2019-12-15 17:29:47
ललितपुर । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे नै सभामुख किन नहुने भन्ने बारे सांसद महिला र पत्रकार महिला बीच छलफल भएको छ ।
संचारिका समूहले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको सांसद महिला र पत्रकार महिलासंगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले यदि वर्तमान उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख नबनाउने हो भने नेपाली महिलाहरूले एकपटक आन्दोलनका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद डा. बिन्दा पाण्डेले सभामुखको अनुपस्थितीमा, सभामुखलाई पालो दिन मज्जाले संसद चलाइरहेकी डा. तुम्बाहाम्फे सबै कुराले सभामुख हुन योग्य व्यक्ति भएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, “उहाँजस्तो क्षमतावान व्यक्ति सभामुख पाउन गाह्रो छ । यदि कुनै कारणले उहाँलाई सभामुख बनाइएन भने त्यो कारण हो, उहाँ महिला हुनु ।ˮ पाण्डेले महिला भएकै कारणबाहेक उहाँलाई सभामुख बनाउन नहुने अरु कुनै चित्त बुझ्दो कारण नरहेको बताइन् ।
सांसद निरुदेवी पालले भनिन्, “औपचारिक शिक्षामा विद्यावारिधी (पीएचडी) हाँसिल गरेको । कानूनको विद्यार्थी । ४० वर्ष राजनीति गरेको । राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलन र महिला आन्दोलनको सशक्त योद्धा । शालिन व्यक्तित्व, उहाँˮ पालले प्रश्न गरिन्, “यो भन्दा योग्य अनि सक्षम व्यक्ति अरु को हुन सक्ला ?ˮ पालले महिला भएका कारण होइन, सभामुख हुन योग्य मान्छे भएका कारण पनि डा. तुम्बाहाम्फे सभामुख हुन लायक व्यक्ति हुन् भनिन् ।
पत्रकार महिला र सांसद महिलाको सम्बन्धलाई कसरी निकट र समन्वयात्मक बनाउँन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आयोजित भेटघाटमा अन्य विषय भन्दा उपसभामुख डा. शिभमाया तुम्बाहाम्फेको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।
नेपाली राजनीतिमा लिंगको भन्दा लैंगिकताको विषय समस्याको रुपमा रहेकाले समानता कायम गर्न खोज्दा पितृसत्तात्मक सोच हाबी हुने गरेको सांसद निरा जैरुको भनाइ थियो । विगतमा समावेशिताको मुद्दालाई उठाएको नेकपालाई सभामुखमा डा. तुम्बाहाम्फेलाई नै पठाउने र उपसभामुख पनि महिला नै बनाएर नेपाली राजनीति र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उदाहरण बन्ने सुनौलो अवसर आएको पनि जैरुले बताइन् । उनले भननिन्, “संविधानले त सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला भनेको पो हो त । महिलाचाहिँ उपसभामुख मात्रै हुनुपर्छ भनेको होइन नि । त्यसैले यी दुबै पद महिलालाई नै दिँदा के फरक पर्छ ? ˮ
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार महिलाहरूले राजनीतिमा लागेका, सबै पार्टीका महिलाहरू डा. तुम्बाहोम्फेलाई सभामुख बनाउने अभियानमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
संचारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले नीतिगत रुपमा भइरहेका परिवर्तन, प्रयास र राजनीतिक मुद्दाहरू बारे छलफल, वहस र प्रचारका लागि पत्रकार र सांसद महिलाहरू बीच नियमित भेटघाट र छलफल आवश्यक भएको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।
कार्यक्रममा सांसद दिलकुमारी शाह, अञ्जना विसन्खे, हिरा गुरुङ लगायत १० जना सांसद र २५ जना पत्रकार महिलाको उपस्थिती थियो ।